Fitsaboana sy fahasalamana " Journey-Assist - fizahan-tany ara-pitsaboana
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fitsaboana sy fahasalamana
Fitsaboana sy fanatsarana (fizahantany fizahana)
Ny fizahan-tany ara-pahasalamana dia karazana fitsangantsanganana malaza indrindra tato ho ato, ny tena tanjona dia ny fanarenana fisorohana na fitsaboana aretina any ivelany. Ny fahasamihafana amin'ny karazana fizahan-tany hafa dia miankina amin'ny fampifangaroana fialamboly amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana omen'ireo ivon-toerana sy toeram-pitsaboana manerantany. Ny fizahan-tany ara-pitsaboana dia mamela ny marary rehetra hiantehitra amin'ny fanampian'ny manampahaizana manerantany.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fizahantany ara-pitsaboana
Ny firenena malaza amin'ny dia mivezivezy miaraka amin'ny tanjona fanasitranana sy fitsaboana.
Ahoana ny fisafidianana ny lalana tokony haleha amin'ny dia toy izany
Ny tombony azo amin'ny fizahantany ara-pitsaboana alohan'ny fitsaboana any amin'ny firenenao
Ny fampiasana teknolojia maoderina ho an'ny fitiliana sy fitsaboana, ahafahana mamaritra tsara ny fitiliana ary mifantina ny fitsaboana amin'ny sehatra fitsaboana tsirairay.
Ny fomba fitsaboana fanavaozana, voamariky ny fanaintainana sy ny atraumatic.
Manome toeram-pitsaboana amin'ny fitaovana maoderina. Ny fisian'ny fitaovana ilaina tsirairay, izay mahatonga ny marary mora mitsabo sy mamerina.
Fitsaboana fomba tsy manam-paharoa. Ny serivisy sasany omena amin'ny toeram-pitsaboana vahiny dia tsy misy ao amin'ny firenena marary.
Serivisy kalitao. Ny mpiasa mpitsabo dia manana ny fahalalana rehetra ilaina ho an'ny fitsaboana mahomby amin'ny marary vahiny.
Firenena malaza amin'ny fitsangatsanganana amin'ny fahasalamana sy fitsaboana
Israel no firenena voalohany tadidin'ny olona rehetra mieritreritra fitsaboana any ivelany. Ny tombony lehibe ho azy dia ny haitao mandroso, izay maro no novolavolaina teto, tany Israel. Ny singa iray manandanja amin'ny fitsaboana eo an-toerana dia ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny SIC sy ny tobim-pahasalamana, noho izany ny zava-bita siantifika farany nahita fampiharana azo ampiharina.
Ny fanafody israeliana dia malaza indrindra amin'ny indostrian'ireto manaraka ireto:
Alemanina dia mpitarika iray hafa amin'ny fizahan-tany ara-pitsaboana. Ny fitsaboana alemà dia heverina ho tsara indrindra any Eropa! Ny tombony lehibe ho an'ity firenena ity dia ny fototra teknika mandroso, izay ahafahana mamantatra sy mitsabo aretina amin'ny alàlan'ny fitaovana farany, anisan'izany ny robotika.
Ny manampahaizana momba ny kilasy avo lenta dia miasa eto, manavaka ny asan'ny mpandeha an-tanindrazana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ary koa, ny toeram-pitsaboana Alemanina samihafa dia mitazona fiaraha-miasa eo amin'izy ireo sy amin'ireo toeram-pitsaboana any Amerika. Noho izany antony izany, mandritra ny fitsaboana any amin'ny klinika iray dia afaka manatona manam-pahaizana manokana avy amin'ny iray hafa ianao. Ny fitsaboana any Alemaina dia mivoatra indrindra amin'ireto sehatra manaraka ireto:
Korea Atsimo dia lasa mpifaninana lehibe indrindra amin'ireo firenena eropeana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ara-pitsaboana. Laharana faha-4 amin'ny fahombiazan'ny fanafody (Bloomberg), ary ny salan'isa mahazatra amin'ny Koreana dia 82 taona, izay miteny koa manoloana ny kalitaon'ny fitsaboana azy ireo.
Ny haavon'ny vidiny eto dia ambany noho ny any andrefany, saingy ny kalitaon'ny serivisy amin'ny fitsaboana dia somary mampitaha. Eto, ny teknolojia maoderina dia ampiasaina betsaka, ampiasain'ny fampandrosoana vaovao. Na izany aza, ny fanafody dia tsy misy raha ny hevitr'ireo Aziatika: ny dokotera Koreana Tatsimo dia manambatra ny fomba maoderina sy nentim-paharazana taloha, na dia manana anjara toerana lehibe aza ny taloha. Ireo dokotera any Korea Atsimo dia nahatratra valiny ambony indrindra amin'ireo orinasa manaraka ireto:
Oncology. (90% ny fandidiana nahomby ho an'ny kankerin'ny atidoha malemy)
Ny toeram-pitsaboana eo an-toerana dia manome serivisy serivisy kalitao toy ny any Alemaina mpifanolo-bodirindrina. Mandritra izany fotoana izany, i Aotrisy dia manana ny endrika voajanahary sasany izay manampy amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany ara-pahasalamana. Loharano mineraly maro sy fotaka fanasitranana no nahafahan'ny namoronana resa malaza eran'izao tontolo izao. Ny toetrandro malefaka sy ny tendrombohitra dia nandray anjara tamin'izany. Ho fanampin'ny trano fandraisam-bahiny, ny foibe fanarenana dia miasa eto, ahafahan'ny marary miverina mandeha amin'ny tongotra rehefa vita ny fitsaboana maharitra.
Ny fanafody Australiana no mahomby indrindra amin'ireto faritra manaraka ireto:
Tsy toa an'i Korea Atsimo, ny fanafody any Chine dia mampiasa bebe kokoa ny fomba oriental taloha. Ny fanafody Shinoa fahiny dia miorina amin'ny fahalalana efa nangonina nandritra ny an'arivony taona momba ny vatana, fa koa ny dokotera dia manana traikefa azo ampiharina sy mampihatra ny fisainan'ny siansa maoderina. Ny fomba tatsinanana any Chine dia mitovy amin'ny fanafody nentim-paharazana.
Ny fomba lehibe amin'ny fanafody toy izany dia acupuncture sy massage. Raha tokony hiomanana amin'ny pharmacological dia ampiasaina ny fiomanana amin'ny fihinana ahitra. Ny fampandrosoana ny fizahantany ara-pahasalamana eto amin'ity firenena ity dia manamora ny sanatoriums, izay ahitana loharano mineraly marobe, fotaka fitsaboana izay afaka mahomby sy hisorohana aretina maro. Ny fanafody sinoa dia mahomby indrindra amin'ireto faritra manaraka ireto:
Mpizahatany maro koa no tonga any Hongria hotsaboina ary ho fanarenana. Ity firenena ity dia manamarika ny fisian'ny vidin'ny serivisy fitsaboana. Voalohany indrindra, mihatra amin'ny kosmetika, fandidiana plastika sy ny mpitsabo nify. Ary koa, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny orthopedics, ophthalmology ary endoprosthetics dia nahomby tamim-pahombiazana.
Ny rafi-pahasalamana Hongria dia tena mitovy amin'ny anglisy. Mihatra amin'ny fepetra hentitra izy io, vatana misy fitsipika mifehy, izay manatsara ny kalitaon'ny serivisy. Ohatra, ny mpitsabo mpandidy plastika iray ao amin'ity firenena ity dia tsy maintsy miaina fiofanana 13 taona hahazoana fahazoan-dàlana.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ity firenena ity dia lasa malaza hatrany amin'ny ivon-toerana fizahan-tany ara-pitsaboana. Nahatratra 2 000 000 isan-taona ny isan'ireo marary vahiny nitsidika an'i Thailand. Ity firenena ity dia manintona amin'ny fahatsorana fidirana sy ny vidiny mora amin'ny paika. Ny dokotera izay mahazo mpizaha tany dia mahazo mari-pahaizana ambony dia avo, ary matetika koa dia manana traikefa miasa any ivelany.
Ny mpizahatany mpitsabo dia omena any amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina, mihoatra ny 30 amin'izy ireo no ekena maneran-tany. Tonga eto ny fikarakarana ara-pitsaboana amin'ny sehatry ny mpitsabo nify, orthopedics, gynecology. Any amin'ny klinika sasany, ny fitsaboana matavy loatra dia voatsabo amin'ny fomba mahomby. Ireo dokotera Thailand dia nampiasa betsaka tamin'ny fomba taloha ihany koa, indrindra fa ny massage sy ny aromatherapy.
Ny rafi-pitsaboana any Etazonia dia mitana ny laharana voalohany manerantany manoloana ny halehiben'ny loharanon-karena mifantoka ao. I Etazonia koa dia laharana voalohany amin'ny resaka fandaniana amin'ny fitsaboana! Arak'izany, ny tobim-pitsaboana any Etazonia dia omena fanafody, fitaovana ary fitaovana mandroso indrindra. Ny isa lehibe indrindra amin'ny fanendrena Nobel dia ao amin'ny tontolon'ny fitsaboana amerikana. Ary koa, amin'ny statistika, ny dokotera amerikanina dia betsaka noho ny dokotera any amin'ny firenena hafa amin'ny resaka vola miditra.
Araka izany, ny vidin'ny serivisy fitsaboana any Etazonia dia tsy ambany, indrindra fa raha tsy tompon'ny fiantohana tena ilaina ianao. Fa matetika, ny fahasalamana dia lafo lavitra noho ny vola!
Misafidy fitsangatsanganana ho fitsaboana na fanarenana
Ny safidin'ny firenena amin'ny fitsangatsanganana ho an'ny tanjona ara-pitsaboana dia voafaritry ny fitiliana manokana, ny fahaizan'ny vola, ny tiana manokana ary, mazava ho azy, ny famerenana.
Ny fisafidianana toeram-pitsaboana manokana dia tokony atomboka amin'ny fijerena ireo tranonkala andrim-panjakana isan-karazany, azo atao koa ny miresaka manokana amin'ireo solontenan'ny toeram-pitsaboana amin'ny alàlan'ny telefaona (misy fangatahana antso ho an'ny serasera), azonao atao ny mandefa fangatahana amin'ny kajy ny vidin'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny safidy ny fitsidihana ny halalan'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny andrim-panjakana tianao. Ny fiheverana dia tokony hotsaraina amin'ny fahafaha-mahefa ny safidy fomba. Nasaina nandà avy hatrany ireo izay manandrana mametraka serivisy tsy ilaina. Mazava ho azy fa ilaina indray ny mandinika ny famerenana.
Alohan'ny hamaranana ny fifanarahana amina toeram-pitsaboana iray dia tokony hazavaina amin'ny fepetra tokony hapetraka, na antontan-taratasy ara-pitsaboana dia tokony adika, ary na ny valim-pitsaboana navoaka any amin'ny toeram-pitsaboana ao amin'ny firenenao dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana any ivelany.
Voalohany, mila mahita ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny fitsidihana ny mpitsabo (indraindray dia tsy mitovy amin'ny fepetra takiana ho an'ny mpizahatany mahazatra, na dia ny tranga vonjy maika aza dia mamela ny fidirana malalaka amin'ny visa any amin'ny firenena mba hahazoana fitsaboana izay tsy azo ametrahana ny firenenao).
Ny fizahan-tany ara-pitsaboana dia miroborobo noho ny tsy fitovizan'ny vidin'ireo fomba fitsaboana, ny tsy fisian'ny filaharana amin'ny fandidiana fandidiana ary ny teknolojia fitsaboana maoderina. Ankehitriny dia indostria ara-toekarena voaforona tanteraka miaraka amin'ireo mpitarika azy.